Hay’ada u dooda Xuquuqda aadanaha oo ka hadashay duqeyn lagu diley qaxooti Soomaali ah – idalenews.com
Hay’ada u dooda Xuquuqda aadanaha oo ka hadashay duqeyn lagu diley qaxooti Soomaali ah
Human RightsIdale Somali News Update
Baydhabo(INO); Hay’adda Xuquuqul Insaanka ee Human Right Watch (HRW) ayaa ku tilmaantay in weerarkii ay xulafada uu Sacuudiga hogaaminayo ku qaaday doon dad rayid ah oo Soomaali ah saarnaayeen oo maraysay xeebta Yaman ay u badan tahay inuu dembi dagaal ahaa.
HRW ayaa xustay in goobjoogayaal ay sheegeen in 16-kii Maarso 2017 ay diyaarad helikobtar ah duqeysay doonta halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 ruux oo ka mid ah 145 qaxooti Soomaali ah oo doonta saarnaa iyo qof rayid ah oo Yaman u dhashay.
Duqeyntan ayaa sidooale 29 qof oo kale oo ay ku jiraan 6 carruur ah ay ku dhaawacmeen, waxaana la la’ yahay 10 ruux.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee HRW ayaa waxa ay intaa ku dartay in dhinacyada ku lugta leh colaadda ay beeniyeen in ay mas’uul ka ahaayeen weerarkaasi, hase yeeshee xulafada uu Sacuudiga hogaaminayo oo keliya ayaa leh diyaarado dagaal, halka xooggaga Xuutiyiinta iyo kuwa Cali Cabdalla Saalax aysan lahayn awooddaasi.
Gabagabadii, Warbixinta ay Human Rights Watch ka soo saartay weerarkii lagu laayay Soomaalida qaxootiga ah iyo duqaynta xulufada Sucuudigay ee Yemen ayay ku sheegtay inaysan suurtagalin in ay ogaato dalka ay diyaaradiisu weerartay doonta qaxootiga.
Qaraxyada lagu xiro gaadiidka oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho
Jaamacada Caalamiga ah Ee Baydhabo (BIU) iyo Midowga iskuulada Baydhabo oo iska kaashanaya siminaar sare loogu qaadayo aqoonta ardayda fasalka 12aad.